Nhau - Xinhua News Agency mutori wenhau kuChenguang biology
Mazambiringa Mbeu Inobvisa
Mukaka Thistle wabvisa
Green Kofi Bhinzi Bvisa
Zvinonhuwira & Zvakakosha
Mafuta & Mapuroteni
Xinhua News Agency mutori wenhau kuChenguang biology
Musi waZvita 8, Quzhou yainyanya kutonhora munguva inorema yechando. Panenge pa5 masikati, Chen Zhonghua, mutevedzeri wemutevedzeri wemupepeti mukuru webazi renhau reHebei reXinhua agency, Wang Min, director webazi rezvehupfumi, Yan Qilei, mutevedzeri wemukuru webazi rezvehupfumi, nevamwe vanhu vashanu vakaita musangano wakakosha. rwendo kubva kuShijiazhuang kuenda kuChenguang biology kubvunzurudza Lu Qingguo, maneja mukuru weHebei "shanduko yemabhizinesi zviuru gumi".
Mukamuri rechina remusangano wekambani yeChenguang yeboka reboka, vaenzi nevashanyi vakatora zvigaro zvavo. Mushure mekuona iyo Chenguang yehupenyu firimu firimu, Chen Zhonghua akaratidza kunyemwerera pachiso chake chakachengetedzwa. Achiperekedzwa naLu Qingguo, Chen Zhonghua akapinda muimba yekuratidzira. Lu Qingguo akaunza zvakajairika mamiriro, kosi yekusimudzira, kugoverwa kwezvigadzirwa uye mbishi zvinhu zvembichana, uye chinzvimbo muindasitiri yeChenguang biology. Pamberi pekuparadzaniswa kwenhengo, apo Lu Qingguo akaunza kuti Chenguang biological akatenga anopfuura 100000 mu ivhu muZambia senge mbishi yezvigadzirwa yekugadzira "spare tire" kune ramangwana kukura kwekambani, Chen Zhonghua akaramba achirumbidza achiti: "chiratidzo ! Une yako midziyo fekitori. Une kodzero dzako dzepfuma dzekushandisa, tekinoroji nemidziyo. Hapana mumwe munhu anogona kudzidza uye kubata newe. Kuvaka chigadziko chezvinhu zvakasvibira muAfrica zvakare kugadzirira kwezuva rekunaya. Iko kuchengetedza kurongeka kwepasirese kweramangwana. ”
“Zvigadzirwa zvatinogadzira izvozvi zvinotengeswa kuUnited States sezvinhu zvakagadzirwa (zvigadzirwa zvehutano), zvobva zvaiswa mumacapsule muUnited States ndokuzotengeswa kuChina. Isu tinovatengesa imwe yuan, uye tinovatenga kubva kuUnited States ne100 yuan. Unofunga kuti tinogona kurasikirwa here? ” Lu Qingguo akaenderera mberi achiti: “ngatifambei muindasitiri yazvino hombe yehutano yezvigadzirwa zvekurapa uye zvechivanhu mishonga yechiChinese, tozviita zvigadzirwa zvinoguma, kuti vanhuwo zvavo vazvidye. Mhedzisiro yacho yakanaka uye yakachipa. ” Chen Zhonghua akatora mazwi ndokuti, "nenzira iyi, hatifanire kuenda kunze kwenyika kunogadzira zvakare!"
Ivo vaviri vanofunga kuti inguva yakanaka yekuti Chenguang bio agadzire chikafu chehutano. Mumakore gumi kana makumi maviri anotevera, huwandu hwevanhu vanoshandisa huchakwira, ruzivo rwavo rwehutano huchavandudzwa, uye vachanzwisisa zvirinani zvigadzirwa zveChinese Panguva iyoyo, zvichave zvakasikwa kuti kambani iwedzere kukura uye kusimba.
Lu Qingguo akaunza zvigadzirwa zvekambani kune vatori venhau mumwe nemumwe, izvo zvakaita kuti vatori venhau vave vatsva uye vatsva. Chen Zhonghua akati, "Ndanga ndichifunga kuti inogadzira zvinhu." Lu Qingguo achipindura achiseka, "makore makumi maviri apfuura, takagadzira Hardware." Achinongedzera kubhokiti re "nyika inozivikanwa bhizinesi tekinoroji nzvimbo" pamadziro, akati: "isu takapihwa chiyero chakanakisa pakati peanopfuura 1000 emakambani emakomputa emuchina muChina, uye kune angori akawanda emhando yepamusoro, kusanganisira Huawei, ZTE, nezvimwewo Yan Qilei, uyo anowanzoita misangano yedare reParty Party nehurumende yematunhu, akati kuna Lu Qingguo, “Gavhuna Xu Qin vanga vachikushambadzirai Chenguang mumakore maviri apfuura. Kunyangwe musangano wacho uri mudiki sei, anoti, “Ah! Ini ndaisatarisira kuti Quzhou, dunhu rakadai rekurima, raizove nemhare isingaonekwe!
Post nguva: Jan-15-2021
Chenguang Biotech Boka Co, Ltd.